Efa Hita amin’ny Teny Espaniola ny Torolàlana ‘Manorata Bilaogy ho ana Fotokevitra!’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2018 18:16 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Martsa 2008) Efa hita amin'ny teny Espaniola ny Blog for a Cause!, ilay Torolàlana ho an'ny Blog Advocacy (Fiarovana amin'ny alàlan'ny Bilaogy) nataon'ny Global Voices, isaorana i María Florencia Puente avy ao amin'ny Global voices en Español tamin'ity dikateny ity.
Manolotra fika mora arahina amin'ny fomba fampiasàna ireo bilaogy ho isan'ny hetsipanentanana enti-manohitra ny tsy rariny io torolàlana io ary manasongadina ohatra mahomby amin'ireo bilaogy fiarovana manerana izao tontolo izao. Ahitàna fizaràna dimy izy io:
Fanontaniana matetika mipetraka momba ny atao hoe Fiarovana amin'ny alàlan'ny Bilaogy
Singa 5 lehibe indrindra hampahomby ny bilaogy fiarovana iray
Dingana efatra famoronana bilaogy fiarovana
Ahoana no hamadihana ny bilaoginao ho vondrompiarahamoninà mpirotsaka antsitrapo mavitrika
Fika hanampiana ireo mpikatroka mafana fo mampiasa bilaogy hieren-doza anaty aterineto.
Afaka trohana amin'ny endrika failo PDF ny Blog Por Una Causa!. Mety hila hametraka ny Adobe Acrobat Reader maimaimpoana ao anaty solosainao ianao hijerena izany.
Miangavy anao hisintona ny Blog Por Una Causa! ary hanampy anay handika ny torolàlana amin'ny teninao.
Raha mila fanazavàna fanampiny, miangavy anao hifandray amin'i Mary ao amin'ny MaryCJoyce [ at ] gmail [ dot ] com na amin'ny Mpandrindra ny Global Voices Advocacy, Sami Ben Gharbia, ao amin'ny advocacy [ at ] globalvoicesonline [ dot ] org.